Si dhakhso ah Samee Online Kediska la weedhood Software
> Resource > Talooyin > siyaalo dhab ah oo weedhood Software in Samee Online Kediska
Sida aynu wada ognahay, imtixaan lagu qaadi intarnatka keeni karaan wax badan oo ka mid ah faa'iidooyinka ay u qiimaynta, ee lagu badbaadinayo waqtiga, dabacsan iyo dhaqaale. Wixii tababarayaasha iyo macallimiinta, iyaga oo aan haysan si ay u tudhin markii si ay u xusaan baarayo sababta oo ah natiijada imtixaanka waxaa si otomaatik ah sarreeya karo --keydinta markii weyn. Baaritaanka dableeyda, waxay ku qaadan kartaa imtixaanka online at ay waqti u gaar ah doorbido - dabacsanaan weyn. Wixii ururada, tijaabinta online badbaadiyay badan oo ka mid ah kharashka si ay u shaqaaleeyaan samaynta bare iyo malaayiin print waraaqaha imtixaanka - ka dhaqaale badan.
Sidaas awgeed, waxaan ku arki kartaa imtixaanka qaadashada barnaamijyada waxaa lagu helo caan kordhaya, maxaa yeelay, macalimiinta iyo aad u badan, tababarayaal, cilmi iyo qiimeeyayaasha ay u baahan yihiin ee la abuurayo aalaha ama qiyaaso ardayda ama aqoonta ardayda. Thanks iyaga, samaynta baaritaan online noqotaa mid aad u fudud. Halkan qodobkan soo bandhigi doonaa codsiyada gaare imtixaanka serveral ama siyaabo abuurka kedis degdeg ah si aad u kedis qaadashada online.
Samee Online Kediska la HTML code kedis
PHP - Tutorial saabsan sida loo sameeyo Kediska ah ama Interactive Site
Samee Online Kediska la Code: Abuuridda Goobaha
Waxaa jira laba goobood oo awood u isticmaala si ay u abuuraan code HTML kedis ah si fudud. Waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa buuxinaya content su'aal aad sida ay tahay qaab cayiman, iyo code HTML kedis ah in si degdeg ah ahbaa doonaa. Markaasay aad nuqul karo iyo badbaadin code sida bog HTML (.htm, .html). Waxaan qaadan doonaa http://www.attotron.com/pub/Quizmake.htm sida tusaale ay ku tusaan sida.
Tallaabo 1: Ku qor nuxurka qoraalka loo baahan yahay in si beeraha.
Talaabada 2: Abuuri code kedis.
Riix dar Su'aal iyo su'aasha lagu dari doonaa in aad ka shaqeyso su'aalaha. Riix Samee Kediska markaas waxaad heli doontaa soo socda code il.
Hadda waxaad arki kartaa su'aalaha si aad u hubiso sida ay u shaqayso.
Waxa kale oo ay Kediska Kan sameeyey Kediska
Samee Online Kediska la Online Kediska abuurkii Services
Waxaa laga yaabaa inaad ka heli code khayraadka kor ku xusan in ay abuuri karto bogga kedis HTML , laakiin waxa aad ka arki kartaa su ahbaa ka code khayraadka waa iska sahlan. Si aad kedis ah noocyada su'aal badan, inaad sameyso wax badan oo shaqo barnaamijyada. Dhab ahaantii, waxaa jira goobo badan oo ay bixiyaan adeeg abuurka kedis ah oo lacag la'aan ah online oo waa u fududahay in aad ka shaqeyso su'aalaha iyo qiimeynta aad marti online. Gaare kedis Proprofs ( http://www.proprofs.com/quiz-school/ ) waa mid ka mid ah taagan 5 nooc oo su'aal ay taageerayaan, iyo sawiro iyo filimo la gundhig karaa si kedis ah in ka badan mashquuliya. Waa maxay dheeraad ah, marka aad salaadda dhamaysatona abuurka kedis on Proprofs ah, waxaad la wadaagi kartaa link siiyey kedis dadka kale si fudud on Facebook, Twitter, ama aad blogs / goobood. Oo weliba waxaa Proprofs weedhood, Quibblo iyo Classmarker sidoo kale bixiyaan qaababka la mid ah.
Samee Online Kediska la Xoog Software
Waxaa jira siyaabo badan oo lacag la'aan ah si ay u abuuraan kedis online, laakiin waxa laga yaabaa in noocyada su'aal aad soo saari kara waa kuwo xadidan. Proprof yimaado 5 nooc quesiton iyo qaar ka mid ah muuqaalada abuurka kedis aasaasiga ah. Waxay arrintu u muuqataa xun ma aha. Laakiin haddii aad u baahan tahay qaar ka mid ah muuqaalada sare iyo customizable, inaad si fiican u dayactir ku lahaa xisaabtaada.
Si loo sameeyo kalifaya iyo xirfad dheeraad ah oo kedis, kedis ah oo aad u fiican ka Uumihiisa la Wondershare QuizCreator waa xal kaamil ah. Waxaa dadka isticmaala si ay u abuuraan awood u kedis ah oo ilaa 9 Hababka su'aal . Buuxi beeraha su'aalo iyo jawaabo oo geliso faylasha multi-warbaahinta (haddii ay u baahan yihiin), ka dibna aad daabici karo kedis flash la bogga HTML ah, iyo geliyaan faylasha ahbaa online si aad ula wadaagto qof walba. Intaa waxaa dheer, waa siyaabaha kala duwan si ay ula socdaan natiijada raadraaca natiijada sida la email, Kediska Management ama LMS. By jidkii, qaar ka mid ah fursadaha daabacaadda kale sida xirmo LMS, file eedeysanuhu, Word / Excel sidoo kale waxaa laga heli karaa.
Adobe Flash sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa si ay u abuuraan aalaha Flash, haddii aad tahay casri ah oo la Adobe Flash Script. Waxaad u abuuri kartaa baaritaanka ee noocyada su'aal badan sanamyadooda, dhawaaqyada, iyo filimaan Flash. Halkan waa tutorial ah oo ku saabsan sida loo abuuro kedis ah in Adobe Flash CS4 . View su'aalaha ku abuuray by Adobe Flash oo ka xulo jawaabta saxda ah ee menu hoos-hoos.
Samee Online Kediska la Google Docs
Google Docs waa aalad gebi ahaanba bilaash ah online ah si ay u qabtaan baaritaano kala doorashada badan online iyo sahan. Sidaa daraadeed, waxaad samayn kartaa a imtixaanka doorashada badan , yeedhi kuwa kale si ay baaritaanka ka dibna fasalka imtixaanka qaato si toos ah ula shaqayn ay caanaha. Intaas waxaa sii dheer, waxa ay abuuri karaan falanqaynta garaaf xeeldheer su'aal kasta oo aad ku ogaan karaa heerka kooxaha dableeyda ee imtixaanka 'waxgarashada aqoon cayiman. Halkan waxaa ku Hanuuniyaa kuu wanaagsan:
Hagaha si ay u sameeyaan baaritaan online la Google Docs
Guide si ay u wadaagaan imtixaanka online abuuray by Google Docs
Guide fasalka ka kedis Google Docs si toos ah
Sida loo abuuro GIF Muqaal ah
Sida loo sameeyo Dhigashada Maydho shakhsiga Baby